Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Ny hotely eran-tany dia mitaky tolona ambony miakatra amin'ny vidin'ny fifaninanana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Miverina amin'ny fiaramanidina ireo mpandeha na mizaka ny arabe amin'ny fiatoana ilaina amin'ny monotony any an-trano sy amin'ny be loatra an'ny Netflix.
Tamin'ny 25 Jona 2021 dia olona 2,137,584 no nandalo ny seranam-piaramanidina amerikana, raha ny filazan'ny TSA.
Any Etazonia, izay misy fanjakana sy tanàna maro manohy mampiato ny protokolan'ny COVID, dia nitohy ny diany tamin'ny volana Mey ny fidiram-bolan'ny hotely.
Ny hotely eropeana dia tara any amin'ny faritra hafa satria firenena maro no manohy mampiasa fitsipika manakana ny fiverenan'ny dia.
Miaraka amin'ny areti-mandringana manerantany izay mampiseho marika famelan-keloka sasany, ny indostrian'ny hotely iraisana dia mioty valisoa, satria miverina amin'ny fiaramanidina ireo mpandeha na mizaka ny arabe ho an'ny fialan-tsasatra ilain'ny mpiasa monotony avy any an-trano sy ny be loatra an'ny Netflix. Ny indostrian'ny hotely dia faly mandray azy ireo indray, saingy ny tsy fahatomombanan'ny karama - ny vokatra amin'ny ampahany sasany mbola tsy miverina am-pitiavana, toy ny orinasa sy ny vondrona - tohanan'ny fandaniam-bola sy ny tsenan'ny asa sarotra loatra, dia misy vokany eo amin'ny farany ambany.
Ny US Push
Tamin'ny 25 Jona 2021, olona 2,137,584 no nandalo seranam-piaramanidina amerikana, araka ny TSA, isa izay 78% amin'ny totalin'ny 25 Jona 2019, ary 237% mihoatra ny 25 Jona 2020. Mivezivezy indray ny olona, ​​izay midika hoe mijanona amin'ny hotely indray izy ireo.
ao amin'ny USA, izay misy fanjakana sy tanàna marobe manohy miala sasatra amin'ny protokol COVID, nitohy ny diany tamin'ny volana Mey, miaraka amin'ny RevPAR dia nitombo 539% tamin'ny taona lasa izay, nefa mbola ambany kokoa ny 51% noho ny Mey 2019. Miaraka amin'ny fidiram-bolan'ny efitrano fialantsasatra , ny vola miditra rehetra dia narahina, hatramin'ny $ 127 isaky ny efi-trano misy, fiakarana 541% raha oharina tamin'ny taona lasa izay.
Ny vidin'ny asa dia manodidina ny $ 20 isaky ny efitrano misy hatramin'ny volana Mey lasa teo, vidiny izay tokony hitombo hatrany rehefa hitan'ny mpandraharaha hotely fa mila mamoaka bebe kokoa izy ireo ary manampy famporisihana ireo mpiasa izay mbola mailo hiverina amin'ny asa fandraisam-bahiny na efa niova asa. lalana.
Ny zava-bitan'ny asa lehibe isaky ny efitrano misy dia nahatratra $ 40.55 tamin'ny volana Mey, fiakarana 319% tamin'ny fotoana mitovy tamin'ny taona lasa, saingy ambany kokoa ny 63% noho ny Mey 2019.
Mbola tafahitsoka i Eropa
Ny hotely eropeana dia tara any amin'ny faritra hafa satria firenena maro no manohy mampiasa fitsipika manakana ny fiverenan'ny dia. Tamin'ny volana Mey, ny hotely dia nanangona TRevPAR $ 49.83, izay nanjary GOPPAR mitentina 2.52 €, izay, na dia ambany dia ambany aza, dia volana voalohany nahazoana tombony tsara ho an'ny faritra hatramin'ny septambra 2020.
Ny vidin'ny asa totalin'ny volana dia nahatratra € 23.76, izay 46.8% avo kokoa noho ny tamin'ny ora iray lasa izay, ary € 6 latsaky ny efitrano manontolo RevPAR.
Mitsangana tsy miova APAC
Any Azia-Pasifika, ny fitsangatsanganana an-trano matanjaka dia misy fiatraikany lehibe amin'ny zava-bitan'ny hotely ao amin'ny faritra. RevPAR tamin'ny volana dia nahatratra $ 59.07, izay 141% avo kokoa noho ny tamin'ny fotoana iray taona lasa izay. Nohamafisina tamin'ny taha 50% ny tahan'ny mponina ary ny fiakaran'ny ADR, izay nahatratra $ 118 tamin'ny iray volana. TRevPAR $ 106.39 dia vokatry ny fitomboan'ny fidiram-bola fanampiny, satria nahatratra $ 40.77 ny F & B RevPAR tamin'ny volana Mey, 152% avo kokoa noho ny tamin'ny fotoana iray lasa izay.
Ny fidirana amin'ny fidiram-bola dia vidiny ambonimbony kokoa, izay, amin'ny $ 30.26 isaky ny efitrano misy, dia nitombo 44.9% tamin'ny fotoana nitovy taona lasa izay ary 12 $ ambany noho ny Mey 2019. Ny GOPPAR tamin'io volana io dia niditra tamin'ny $ 27.55, 1,040% avo kokoa noho ny Mey 2020 , saingy mbola latsaky ny antsasaky ny Mey 2019.
Mahatonga an'i Marka ny Moyen Orient
Mitovy amin'ny APAC, ny Moyen Orient dia mitaingina fiakarana tsara any ambadiky ny taha ambony sy ny fiakarana. RevPAR tamin'ny volana dia voarakitra ao amin'ny $ 76.57, fiakarana 222% raha oharina tamin'ny taona teo aloha, manampy amin'ny TRevPAR mitentina 120.88 $, fiakarana 228% tamin'io fotoana io ihany tamin'ny taona lasa.
Mandritra izany fotoana izany, satria mijanona ho maharitra ny vidin'ny asa, saro-kenatra $ 40 isaky ny efitrano misy, ny GOPPAR dia nahatratra $ 37.29 tamin'ny volana, 430% avo kokoa noho ny tamin'ny fotoana iray lasa izay. Ny Moyen Orient dia nahavita 10 volana nisesy tamin'ny fahombiazana tsara.